Hamster, njenganoma iyiphi isilwane, uyakwazi ukuthola ezingcolile. Futhi abanikazi abaningi ngokuqondene nale nkinga, uzibuze - kungenzeka ukugeza hamsters, noma akufanele akwenze?
Yiqiniso, nohlobo awanikeze lezi enhle izidalwa Fluffy ikhono nokuzilungisa ibhulashi up. Kungalungile ukusho ukuthi hamsters yizilwane kuhlanzeke kakhulu, bakulungele ahlale amahora endaweni ethokomele kanye "marafet oqondile". Nokho, abagcinanga "kuhlanzwe", kodwa futhi nekama, usebenzisa ikamu esikhundleni amazinyo akho. Ekupheleni kwalesi nqubo, i-hamster ubukeka cute kakhulu futhi smart, eqondisa izinwele irowu phansi emaceleni. Hhayi njalo ilandelana kuvela bushelelezi, efana wezinwele ezinhle, kodwa namanje hamster kwekhanda kakhulu iza! Eqinisweni, kwakhiwa ilandelana esinjalo, ngoba hamster bazabela aqikelele ukuthi ahlanze Combs kanye neengcezu kwesokunxele nakwesokudla inkonyane wakhe. Ekugcineni, uyakhohlwa ukuze lo nomlomo, azenzele bang imfashini obliquely, ke kubonakala ngokukhethekile kahle kusukela hamsters eside-onezinwele ezimhloshana.
Noma kunjalo, kungakhathaliseki ukuthi kunzima ukuthi hamster, ngalesinye sikhatsi siyaye, abanikazi, phela ukuba angenele inqubo "wokuhlanza" Fluffy. Izizathu yokuthi kungaba ezahlukene, isibonelo, hamster kuvuliwe Saucer ne-yogurt noma ubisi, noma okunye ukudla wakwazi ukuthola ezingcolile, ubeka endlini yakhe ngokucophelela. Ngokuvamile izinkathazo ezinjalo zenzeka kusihlwa noma ebusuku, ngoba ngalesi sikhathi hamsters ziba nomdlandla ngokweqile. Izilwane ukuhamba ezindleleni zakhe futhi uqale 'ukubhidliza "iseli ngokoqobo zimemeza zithi" nenkululeko hamsters. " Bazama ekhuphukela phezulu kwendlu yakhe, bese sifinyelele phansi. Amagundane namazinyo edlubulundayo Ungahudula bese uphonsa emapuletini abo ukudla kwenye indawo ukuhlola - ukuthi ngaphansi kwazo ndima imfihlo inkululeko. Ngenxa yalokho, endlini ngalesi sikhathi isibonisa lingcolile nezesabekayo Yiqiniso, kamuva bayolala kunembeza wakho, ngoba indlela ukuhlanza hamster yena kuphela, hhayi endlini yakhe.
Ezimweni ezehlukile enjalo, ungakwazi ugeze hamsters yakho. Lokhu kumele kwenziwe ngokucophelela. Okokuqala, izinga lokushisa kwamanzi kufanele kube kancane kunakwezinye ekamelweni lokushisa, ukuze hamster akalukhuni, kodwa akuyona ebilayo. Okwesibili, amanzi kunoma isiphi isimo akufanele ungene emehlweni nasezindlebeni sesilwane sakho. Wehlisa yezilwane eyayenziwa ngaphansi yamanzi kusukela empompini akuyona kufiseleka, kungcono uyigcine eduze waphuzisa ngesandla - ngakho ingcindezi amanzi buzoba buncane, futhi hamster ngeke uvalo kakhulu, enomuzwa umnikazi isandla.
Umthetho omkhulu ngesikhathi eyigeza: isikhathi kufanele kube kube kufushane ngokusemandleni. Noma yimuphi hamsters egeza - yilokho eziningi ukucindezeleka ngabo. Zama ukuvula ukubhukuda, uma akunakugwemeka, endaweni ukushaqeka okuncane ukuthi hamster "futhi akazange abe nesikhathi ngibone." Ngokucabanga ngeqiniso lokuthi ngabe kungenzeka ukugeza hamster, khumbula ukuthi hamsters ngokuvamile uvalo akufanele iyayithusa, wamthethisa, ngisho rearrangement kancane ifenisha elisendlini yabo ine nethonya elibi isimiso sezinzwa eyisakhamuzi.
Geza nge imoto noma insipho kuyadingeka kuphela uma isilwane curled izimuncagazi ke usebenzisa insipho yezokwelapha ekhethekile. Kwezinye izimo, kungakhathalekile degree of ukungcola, amanzi elula ngokwanele ehlanzekile.
Ngakho, thina ukhethe zonke izinzuzo nezingozi "impatho okugeza", futhi ukunquma kanye qha kwenela, ukuthi kungenzeka ukugeza hamsters.
Inzuzo ukuthi isilwane ehlanzeka, enhle futhi Fluffy, nakuba lo mbukiso Carry! Ukuze kuzuzwe lokhu ukubukeka imizamo yabo hamster akwenzeki ngaso sonke isikhathi, ikakhulukazi uma kakhulu singcoliswe.
Minuses, ngeshwa, ngaphezulu.
Okokuqala, hamsters babe amasosha omzimba ongaphakeme futhi kulula umkhuhlane. Lokhu kungenzeka kuphela ezingeni lokushisa ongaphakeme egumbini futhi Yiqiniso, ngemva kokugeza. Ngakho zama baphendukele inqubo enjalo, uma egumbini akuyona efudumele ngokwanele. Qiniseka ukuthi ukusula hamster emva ukuwasha futhi uqiniseke ukuthi kukithi okwamanje omiswe ephelele esendlini yakhe ngendwangu efudumele. Kodwa ungazami ome ngayo hairdryer, kungenjalo produete futhi kwakuyozuzisa ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo ngesikhathi esifanayo!
Okwesibili, ebhukuda - ukucindezeleka. Futhi ukucindezeleka waziwa ukunciphisa ukuphila kubo bonke, kuhlanganise hamsters.
Okwesithathu, amanzi kampompi kungabangela uyaxebuka isikhumba kahle emadlebeni hamster. Phela, iqukethe eziningi chlorine futhi ngokuvamile ezinye, akusiyo wusizo ukungcola isilwane.
Ngakho bayazama zonke izinzuzo nezingozi uma ngabe sinquma ukuthi kungenzeka ukugeza hamsters. Ekugcineni kumele kwengezwe elinye. Amagundane asikubekezeleli ukushisa okukhulu. Ngakho kuwe kungase kube okwamanje eqinile, kodwa silwanyana kubi kakhulu kakade. Uzophawula ushintsho ekuziphatheni kwakhe: ngesikhathi sokushisa ngeke ukuphuma endlini futhi mink izolala esitezi yezinyoni yakhe noma aquarium. Esimweni esinjalo kungaba hamster kancane ezimanzi. Moisten kulandela kuphela isigamu ezingemuva amanzi kufanele kube abandayo. Izindlebe kungenziwa nje usule ngesandla ezimanzi. Sula eyomile usesimweni esinjalo akufanele kube hamster, kancane ofakwe, limazise emuva zingene yezinyoni noma aquarium.
Futhi khumbula: ungalokothi ubeke hamsters endaweni okugeza amanzi. Asikho isidingo uhlole ukuthi bayakwazi ukubhukuda, amasheke ezinjalo Ungaqeda ngezinyembezi! Kwakucatshangwa hamsters ukubhukuda, kodwa esaba, ungakwazi minza noma vele uye phansi, inqobo nje uma ungenzi ukususa hhayi kubo namanzi ezindlebeni futhi kweqembu nezinye izinkinga. Uma ufuna ukubona ukuthi "iflothi" hamsters, awukwazi ubageze ngaphansi kwamanzi agobhozayo kusukela entendeni yesandla sakho, futhi indishi, lapho izinga lamanzi kungekho amasentimitha angaphezu kwamathathu. Wehlisa hamster emanzini kuphela ukuba, ubambe isandla sakhe, noma ngeke ngeke ukuntanta bagxume futhi ugijime ngangokunokwenzeka. Lapho izinyawo isilwane sika zithinta amanzi, sizoqala kubo liphindelela egwedla, okusikisela ukuthi sintanta. Ngakho kungenzeka yini ukuwasha noku-hamster, ungakhohlwa ukuthi lokhu kufanele kwenziwe ngokushesha ngangokunokwenzeka nokuthi amanzi akufanele ukuwela izindlebe namehlo komntwana.
Umalusi Berne: incazelo zohlobo. umalusi Training
Izinhlobo of izinja-wolfhounds: incazelo
Unogwaja Oqeqeshiwe: kangakanani ukuqeqesha igundane?
Indlela ukukhulisa wekati: izincomo ezibalulekile
Nars (Izimonyo): ukubuyekezwa, izincazelo. Kuphi ukuthenga izimonyo Nars
Ezemidlalo Porsche 944
Anapa, egibela endlini "Sofia": Izibuyekezo
Grinchevskaya Catherine - uphawu isiteshi "Vesti-24"
Indlela yokutshala izinzipho ezinde isikhathi esifushane?
Le filimu "Igumbi Front": ukubuyekezwa, umakhi. "Igumbi Front" - ifilimu for zokugcina
Nissan avenir: izici lobuchwepheshe kanye izindleko Japanese esiteshini enqoleni
Uyini umahluko kusuka huskies Husky? Indlela ukuhlukanisa phakathi Husky futhi Husky?
"Isikhala" njengoba manicure zenzeke ekhaya?